Shirkada korontada bixisa waa Red Sea Energy. Qodobkaan iibsadaha korontada waxaa loogu yeeraa «macaamil». Shuruudaha heshiiska waa la aqbalayaa marka macmiilku codsado in lagu wareejiyo Tamarta Badda Cas si ay koronto u isticmaasho. Xidhiidhka macaamiisha ayaa la aasaasayaa markii Red Sea Energy ay aqbasho dalabka. Macaamilku waa inuu iska bartaa shuruudaha soo socda. Bixinta korantada ee ‘Red Sea Energy’ waxay u dhacdaa si waafaqsan shuruudaha hoose. Haddii arrimo kale aysan saameyn ku yeelan qodobada heshiiska, Heshiiska Macaamiisha Elektiroonigga ah ayaa lagu dabaqayaa. Shuruudaha la cusbooneysiiyay ayaa had iyo jeer laga heli doonaa websaydhka Red Sea Energy ee ah www.redsea.energy.